ယ်ယူရန် PF 750 (959151-50-9) ပေးသွင်းhplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှု
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / PF 750
rating: အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် Tags: PF 750 ဝယ်ဖို့, PF 750, ရောင်းရန် PF 750, PF 750 ပေးသွင်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ PF 750 (959151-50-9) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
PF 750 အခြားအ serine hydrolases ၏အကွာအဝေးမှာအဘယ်သူမျှမလှုပ်ရှားမှုပြသတဲ့အစွမ်းထက်, အချိန်-မှီခို, နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) inhibitor (IC50 = 16.2 nm) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရွေးချယ်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်း FAAH ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ အသီးသီး 50 နှင့် 0.6 မိနစ် recombinant လူ့ FAAH နှင့်အတူ preincubated သည့်အခါ IC0.016 နှင့်အတူ5နှင့် 60 μMတန်ဖိုးထားသည်။ ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) Hydrolysis နှင့် inactivation များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းဖြစ်ပါသည်
PF 750 ကဗီဒီယို
I.PF 750 အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: PF 750
II ကို။ သံသရာအတွက် PF 750 အသုံးပြုမှု:
2.How PF 750 များအတွက်အလုပ်ပါသလဲ
PF-750 တစ်ပုံဆောင်ခဲအစိုင်အခဲအမှုန့်အဖြစ်ပံ့ပိုးထားပါသည်။ တစ်ဦးကစတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူဆေးကြောထားတဲ့အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအတွက် PF-750 ဖျက်သိမ်းရေးဖွငျ့နိုင်ပါသည်။ PF-750 ထိုကဲ့သို့သောအီသနော, DMSO နှင့် dimethyl formamide (DMF) အဖြစ်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အီသနောအတွက် PF-750 ၏နိုင်မှုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ် / ml နှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20 DMSO နှင့် DMF အတွက် / ml ကို MG ။ PF-750 aqueous ကြားခံအတွက်အနည်းငယ်သာပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ aqueous ကြားခံအတွက်အများဆုံးနိုင်မှုများအတွက် PF-750 ပထမဦးဆုံး DMSO အတွက်ဖျက်သိမ်းရပါမည်, ပြီးတော့ရွေးချယ်မှု၏ aqueous ကြားခံနှင့်အတူရော။ PF-750 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.125 တစ်နိုင်မှုတစ် 1 အတွက် / ml ကို mg ထားပါတယ်: DMSO ၏5ဖြေရှင်းချက်: PBS (pH ကို 7.2) ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးထက်ပိုသောနေ့ရက်များအတွက် aqueous ဖြေရှင်းချက်သိုလှောင်အကြံပြုကြပါဘူး။
PF3အပေါ် 750.Warning
ပိုကောင်းဖျက်သိမ်းဘို့, 37 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာပြွန်အပူနှင့်တစ်ဦး ultrasonic ရေချိုးထဲမှာလှုပ်ခါ။ ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူသာရည်ညွှန်းသည်, ထုတ်ကုန်နိုင်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောနေသည်ဟုသူရှိသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအတွက်လိုအပ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကုန်ပစ္စည်းများ၏နိုင်မှုန့်သတ်ချက်မှလည်းကြီးမားသည်မှန်လျှင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်သိမ်းကူညီခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုထိန်းညှိဖို့တစ် Co-အရည်ပျော်ပစ္စည်းထည့်ပါ။
5 ။ PF 750:
6 ။ PF 750 ချက်ပြုတ်နည်း:
7 ။ PF 750 စျေးကွက်:
III ကို။ PF 750 HNMR
IV ။ AASraw ထံမှ PF 750 ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
"PF 750" ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel